पवित्र देवस्थल अमरनाथको बरफ शिवलिंगको पहिलो तस्वीर सार्वजनिक – Khabaarpati
December 13, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on पवित्र देवस्थल अमरनाथको बरफ शिवलिंगको पहिलो तस्वीर सार्वजनिक
काठमाडौं । लकडाउनका कारण अहिले सबै मानिसहरु घरमा बन्द भएका छन् । हिन्दुहरुको विशेष धार्मिक स्थलका रुपमा रहेको अमरनाथ गुफाबाट एक तस्विर बाहिर आएको छ । बाबा बर्फानीको पहिलो तस्विर बाहिर आएको छ । अमरनाथ गुफा र यस्को अघि हेर्नुहोस्, त्यहाँ चारै तिर हिउँ छ र हिउँको शिवलिंग गुफा भित्रै निर्माण भएको छ । यद्यपि यी तस्विरहरु कसरी बाहिर आए भन्ने खुलासा भएको छैन । दैनिक भास्करले यसबारेमा रिर्पोट गरेको छ ।
अमरनाथ यात्रा २३ जुनबाट शुरू हुनेछ, तर यो यात्रा कोरोनाको कारणले गर्ने हो कि होईन भनेर निर्णय भएको छैन । अप्रिल २२ मा, अमरनाथ श्राइन बोर्डले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यात्रा रद्द गर्‍यो । जुन पछि फिर्ता लिएको थियो । स्रोतका अनुसार यस पटक श्राइन बोर्डले कोरोनाका कारण १५ दिन मात्र यात्रा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसमा यो पनि भनिएको छ कि यो यात्रा बालटाल मार्गबाट ​​मात्र हुनुपर्दछ । महत्त्वपूर्ण कुरा, यात्राको परम्परागत मार्ग पहलगाम, चन्दनवाडी, शेषनाग, पञ्चार्नी हुँदै जान्छ ।
जम्मू कश्मीरमा ४०७ कोरोनाका बिरामीहरू रहेका छन् । जसमध्ये ३५१ काश्मिरमा मात्रै छन् । तालिका अनुसार यस यात्राको लागि दर्ता १ अप्रिल देखि सुरु हुनुपर्ने थियो । यस मार्गबाट ​​हिउँ हटाउने काम यात्रा सुरु हुनुभन्दा महिनौं अघि गरिन्छ, जबकि यस समयमा अझै धेरै फुट हिउँ छ। गत वर्षको सुरूमा भारतको केन्द्र सरकारले धारा ३७० हटाएको थियो । त्यस समयमा सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर ३ दिन पहिले अगस्टमा अमरनाथ यात्रा रोकेको थियो । यात्रा बन्द हुनु अघि ३.५ लाख मानिसहरूले पवित्र गुफाको भ्रमण गरेका थिए ।
सवारी दु८र्घटना : आमाको पेट फु’टेर बच्चा सडकमा ! तरपनि बच्चा बाचेका थिए . .